Ny fizahan-tany any Thailand dia mitady hanokatra indray ny firenena amin'ny 1 Jolay
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny fizahan-tany any Thailand dia mitady hanokatra indray ny firenena amin'ny 1 Jolay
Ny fampielezan-kevitra Open Thailand Safely dia nametraka ny heviny tamin'ny fanangonan-tsonia izay hanohana ny fangatahana ofisialy ho an'ny Governemanta Thai mba hamaly tsara ny famolavolana programa vaksinin'ny COVID-19 any Eropa, Etazonia ary tsena loharanom-pizahan-tany hafa any Thailand.
#OpenThailandSafely no fandraisana andraikitra hitarika ireo orinasam-pitaterana sehatra tsy miankina any YAANA Ventures, vondrona madinidinika ary làlambe aziatika.
Mba hiantohana ny fisokafan'ny soa aman-tsara an'i Thailandy, dia nanamafy ny fanangonan-tsonia fa “ny mpizahatany iraisam-pirenena dia azo angatahina hanome fahafaham-po amin'izay fiarovana takian'ny Governemanta Thai
Amin'ny andro ho avy, ny fanentanana Open Thailand Safely dia handefa ny fangatahana 1 Jolay ho an'ny praiminisitra jeneraly Thailandy Prayut Chan-o-cha, ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa Phiphat Ratchakitprakarn, ary ny governoran'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand, Andriamatoa Yuthasak Supasorn
Orinasa fizahantany iraisampirenena ao Thailand dia nanao fanentanana hanokatra indray ny sisintanin'ny firenena manomboka ny 1 Jolay 2021.
Ny fampielezana #OpenThailandSafely dia natomboka tamin'ny 2 martsa niaraka tamin'ny fanohanan'ny orinasa lehibe 15 mahery ao anatin'izany ny YAANA Ventures, Minor Group, Trails Aziatika, Capella Hotels and Resorts, EXO ary maro hafa.
Ny fampielezan-kevitra Open Thailand Safely dia nametraka ny heviny tamin'ny fanangonan-tsonia izay hanohana ny fangatahana ofisialy ho an'ny Governemanta Thai mba hamaly tsara ny famelana ny Covid-19 Mandeha ny programa fanaovana vaksiny any Eropa, Etazonia ary tsena loharanom-pizahan-tany hafa any Thailand.
Misokatra ho an'ny olona rehetra any Thailand na manerana an'izao tontolo izao ny fanangonan-tsonia izay maniry ny hisokatra indray ny firenena.
Nilaza ny fanentanana fa daty sahaza ny 1 Jolay noho ny antony dimy: ny ankamaroan'ny olom-pirenena amin'ny tsena loharano maro dia efa vita vaksiny avy eo; manome fotoana ny manam-pahefana ara-pitsaboana Thai ny fanaovana vaksiny ny mpiasa an-tsisiny eo amin'ny sehatry ny fandraisana olona any Thailandy sy / na ireo olom-pirenena marefo manerana ny firenena; manome fotoana ireo mpandeha iraisam-pirenena hanao drafitra momba ny dia sy famandrihana; manome daty ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, hotely, mpandraharaha fizahan-tany sy ny hafa ny daty hanombohana ny varotra sy ny varotra ary ho vonona hanomboka ny fizahan-tany fizahan-tany; ary haharitra Thailand, farafahakeliny herintaona, ary angamba lava kokoa, hiverina any amin'ireo mpitsidika iraisampirenena marobe talohan'ny krizy COVID-19.
Mba hiantohana ny fisokafan'ny soa aman-tsara an'i Thailandy, dia nilaza ny fanangonan-tsonia fa “ny mpizahatany iraisam-pirenena dia azo angatahina hanome fahafaham-po amin'izay fiarovana takian'ny Governemanta Thai. Mety misy, ohatra, ny fampisehoana porofo ekena fa vaksiny COVID-19 avy any an-tanindrazany, mividy fiantohana ara-pahasalamana, mampiseho porofon'ny fitsapana COVID-19 ratsy ao anatin'ny 72 ora fiainganana, sns.
#OpenThailandSafely no fandraisana andraikitra hitarika ireo orinasam-pitaterana sehatra tsy miankina any YAANA Ventures, Minor Group ary làlan'ny Aziatika.
Ny tale jeneralin'ny YAANA Ventures, Willem Niemeijer, dia nilaza fa: "Ny fisokafan'ny 1 Jolay dia fotoana mety stratejika ho an'i Thailand mba hanehoana andraikitra mitarika eo amin'ny firenena Aziatika ary hanomana ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny toekarena Thai amin'ny 2022."
Amin'ny andro ho avy, ny fanentanana Open Thailand Safely dia handefa ny fangatahana 1 Jolay ho an'ny praiminisitra jeneraly Thailandy Prayut Chan-o-cha, ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa Phiphat Ratchakitprakarn, ary ny governoran'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand, Andriamatoa Yuthasak Supasorn.
Raha ny filazan'ny Bank of Thailand sy ny loharanom-baovao ofisialy any Thailandy, ny fizahan-tany, talohan'ny COVID, dia mitentina eo amin'ny 2.9 trillion baht (96.5 miliara dolara amerikana). Mpitsidika iraisam-pirenena 39.7 tapitrisa eo ho eo amin'ny taona 2019 no nanampy tamin'ny asa maharitra hatramin'ny 8.3 tapitrisa. Na izany aza, ny tonga dia nilatsaka tamin'ny 6.7 tapitrisa tamin'ny taona 2020 ka olona roa ka hatramin'ny efatra tapitrisa no tsy an'asa.
Mandritra izany fotoana izany, ny toerana itodiana toa an'i Seychelles, Maldives, Greece ary Sri Lanka dia efa nanokatra sisintany na eo am-panaovana dinika mba hanaovana izany manoloana ny famoahana vaksinina COVID mahomby eo amin'ny tsenany loharano lehibe.